Izithuba zeJob e Dubai ngenxa yeNdiya - Faka isicelo kunye neqela lethu!
Izithuba zeJob e-Dubai kwi-Indian
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Novemba 13, 2018
Izithuba zeJob dubai kuba Indian kunye Inkampani yeSixeko sase Dubai. Iingcebiso zethu zengqesho zinceda abafuna umsebenzi wase-Indiya. Injongo yethu kukubanceda bafikelele kwimarike yengqesho. Dubai City inkampani bafaka ngempumelelo amawaka emisebenzi yokufuna umsebenzi. Kwaye siyayazi indlela yokubanceda. Ngokukodwa indlela yokufudukela e-United Arab Emirates. Izithuba zengqesho e Dubai okanye e-Abu Dhabi. Kuvuleleke kakhulu kubaphathi baseNdiya kunye nabafundi abatsha ngokugqiba. Ngoko, kungakhathaliseki ukuba yintoni amava akho. Unga isicelo somsebenzi kwi-Emirates.
Ngokuqinisekileyo, unokukwenza kunye nathi iqela leengcali. Nethu HR Abaphathi Uya kukukhokela emsebenzini kumanye amazwe. Ngoko ukukhathazeka kwakho kuphela kuya kuba, kutheni ndingayifumananga le website ngaphambi kokuba? Ngoko, ngokuqhelekileyo uthetha, zama fumana ngokubanzi njengoko unokukwazi ukususela kwindawo yethu yomsebenzi. Kwaye unale nto engqondweni, jonga kuthi blog. Emva koko faka isicelo kuluhlu lwabaphengululi abahlaziyiweyo kunye neephothifoliyo zabasebenzi. Kwaye sinethemba uya kufumana amanqaku anentshisekelo kunye nezikhuthazo.
Ngoko, ukuba ukhangela ngomsebenzi e-Dubai njengomntu waseNdiya, kufuneka ubhalise iprofayile yakho kunye nenkampani yethu. Emva koko fumanisa abantu abaninzi ukuba banxibelelane nabo kwaye uthethe nabo malunga IUnited Arab Emirates. Ukuthetha jikelele, indlela engcono kakhulu njengomntu waseNdiya ukuxhuma namanye amaNdiya. Kwaye oku kuya kunceda ufezekise impumelelo enkulu yakho yamava okuphila.
Cofa kumfanekiso ukuqala ngeNkampani yase Dubai
Inkampani yaseDubai City ngoku ukubonelela ngezikhokelo ezilungileyo kunye neziqwenga zolwazi kwiNgqesho yeDubai. Iqela lethu ligqibe ekubeni longe ulwazi ngolwimi ngalunye Dubai idlulisa. Ke, unale nto engqondweni, ngoku unokufumana izikhokelo, iingcebiso kwaye ingqesho kwi-United Arab Emirates ngolwimi lwakho.